Seattle Disaster Relief Fund | Somali
Hadda ma aqbalno codsiyada.
Go'aannada abaalmarinta (la oggolaaday ama la diiday): Noofambar 23, 2020 illaa Noofambar 30, 2020
Lacag bixinta: Kadib Diseembar 1, 2020
Waxaad sidoo kale u qalmi kartaa Sanduuqa Gobolka Washington: www.immigrantreliefwa.org.
Sanduuqa Gargaarka Musiibada ee Muhaajiriinta Seattle COVID-19 waxuu dhanyahay $ 7,900,000 oo ah kaalmo lacageed oo toos loo siinayo dadka soogalootiga ee degan Seattle oo dakhligoodu hooseeyo iyo qoysaskooda. Barnaamijkani wuxuu mudnaan siinayaa codsadayaasha aan u qalmin Lacagta ay bixiso dowlada dhexe oo uu dhaqaale xumada CARES Act ay sameeysey (sidoo kalana loo yaqaan "jeeg loogu talagalay coronavirus") iyo caymiska shaqo la'aanta ee gobolka iyadoo lagu saleynayo xaaladdooda socdaal.
Muddada arjigu furanyahay: 3 toddobaad, laga bilaabo Khamiista, Oktoobar 15, 2020 illaa Noofambar 5, 2020
Muddada dib u eegista arjiga: 2 toddobaad, laga bilaabo Noofambar 9, 2020 illaa Noofambar 22, 2020
Qaddarka abaalmarinta qoyskiiba, waxay kuxirantahay tirada qoyska:
Soo Koobida Siyaasada Asturnaanta
Ururka aan faaido doonka aheyn ee la yiraahdo Scholarship Junkies ayaa mas'uul ka ah ururinta macluumaadka shaqsiyeed ee aad arjigigaa ugu soo gudbiso internetka ee Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19 . Scholarship Junkies ayaa sidoo kale dejisay qaabka ku habboon ee muqaal, elektiroonigga, iyo hab maamul si loo ilaaliyo loona xafido macluumaadkaaga. Iyagu iskood ulama wadaagayaan xogtaada hay'adaha dawladda, oo ay ku jirto Magaalada Seattle.
Kahor intaadan dalban, waa inaad:
Soo ururi aqoonsigaaga aad u baahan tahay iyo dukumiintiyada deganaanshaha. Waxaad dib u eegi kartaa liiska agabyada la ansixiyay ee ah www.seattlecovidfund.org/#req-docs.
Xisaabi celceliska dakhliga bishii ku soo gala.
Dhagsii badhanka "Apply" ee ku yaal bogga arjiga ka dibna u gudub badhanka "Diiwaangelinta" oo samee a Survey MonkeyApply Account. Dhowr daqiiqo ka dib markaad is-qorto waxaad heli doontaa emayl si loo xaqiijiyo koontadaada. Fadlan hubi inaad xaqiijiso koontadaada.
Dhamaystir dhammaan su'aalaha codsiga. Tani waxay qaadan kartaa waqti. Waad keydin kartaa dalabkaaga oo waad u soo noqon kartaa wakhti kasta.
Markaad dhamayso dalabkaaga raadi badhanka weyn ee "SOO GUDBINTA" si aad ugu dirto arjigaaga.
Kadib markaad dalbato, fadlan hubi inaad jeeg-gareyso sanduuqa emaylkaaga ama galka qashinka emailka si loo xaqiijiyo. Waxaad sidoo kale heli doontaa xaqiijin fariin qoraal ah maalinta aad gudbiso arjigaaga. Waxaad dib u geli kartaa oo hubin kartaa xaaladda si aad u ogaato in dalabkaaga dib loo eegay iyo haddii lagu siiyay deeqda. Fadlan soo gudbi codsigaaga hal mar oo keli ah.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan buuxinta arjiga fadlan booqo https://seattlecovidfund.org/#app-assistance si aad ula xiriirto mid ka mid ah bulshada aan hawl-wadaaga leenahay..
Si aad u dalbato, waa in aad buuxisaa DHAMMAAN shuruudaha hoos ku qoran:
Waa in aad tahay 18 jir ama ka weyn
Aad ku nooshahay AMA aad dhigatid iskuul ku yaal AMA ka shaqeeyso soohdimaha magaalada Seattle
Aan u qalmin xalaad soo galooti awgeed, Lacagta ay bixiso dowlada dhexe ee sameynta dhaqaale xumada CARES Act (sidoo kalana loo yaqaan "jeeg loogu talagalay coronavirus")
Ay ka yaraayeen 50% dakhliga dhexdhexaadka ee qoyska Seattle sagaalkii bilood ee la soo dhaafay. Shaxda u qalmida dakhliga hoos ayaa laga heli karaa.
Tusaale ahaan, haddii aad u codsaneysid qoys ka kooban afar, iyo wadarta dakhliga qoyskaaga intii u dhexeysay Janaayo 1, 2020 illaa Sebtember 30, 2020 ay ka yar tahay $ 41,513, markaa qoyskaaga ayaa u qalmi doona.
SHAXDA U QALMIDA DAKHLIGA
Wadarta Dakhliga Qoyska Inta udhaxeysa
Janaayo 1, 2020 ilaa Sebtember 30, 2020
Noocee dukumiinti ah ayaan ubaahanahay inaan soo gudbiyo?
Waxaad u baahan doontaa dukumiinti xaqiijinaya aqoonsigaaga iyo degenaanshaha Seattle. Jadwalka hoose wuxuu ku siinayaa tusaalooyinka dukumiintiyada aad isticmaali karto. Fadlan hubi inaad haysato nuqul cad oo ah hal shey ee Liiska A ku qoran ama hal shey oo ku qoran labada Liis ee B iyo C.
Dukumiintiyada Deganaanshaha iyo Aqoonsiga
Kaarka Aqoonsiga Gobolka Washington oo muujinaya magac buuxa iyo cinwaanka Seattle
Ruqsadda Darawalnimada Gobolka Washington oo muujinaysa magaca oo buuxa iyo cinwaanka Seattle
Kaarka aqoonsiga ardayga ee ka yimid iskuul ku yaala Seattle
Biil kasta oo korantada oo muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga Seattle
Biilasha taleefanka gacanta ama biilka internetka oo muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga Seattle
Bayaanka caymiska oo muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga Seattle
Cadeynta bangiga oo muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga Seattle
Cashuur celinta 2019 oo muujinaysa magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga Seattle
Jeega Mushaharka oo muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaanka degenaansha haaga Seattle ama cinwaanka loo shaqeeyaha Seattle
Kaarka aqoonsiga ardayga ee dugsi kasta
Baasaboor waddan kasta
Xaqiijinta diiwaangelinta warqad ka socota dugsiga ku yaal Seattle
Rasiid muujinaya magacaaga oo buuxa iyo cinwaanka Seattle
Warqad saxeexan oo taariikhaysan* oo sheegaysa magaca buuxa iyo lambarka taleefanka ee qofka warqadda qoraya ee hay'adaha soo socda:
Milkiiluhu inuu garowsado deganaanshaha Seattle
Loo shaqeeye ku yaal Seattle oo qiraya shaqadaada hadda ama tii hore
Shaqaale ka socda dugsigaaga oo ku yaal Seattle oo qiraya diiwaangelintaada hadda
Xubin shaqaale ah oo ka tirsan hay'ad bixisa adeegyo ama maareye kiis oo qiraya deganaanshaha Seattle
Wakiil ka socda goobtada cibaado oo qiraya in aad degantahay Seattle
*Waxaad u adeegsan kartaa qaab-dhismeedka arjiga warqaddan.
Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19 Su'aalaha la Weydiiyo (Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo)
1. Sideen ku ogaadaa haddii aan xaq u leeyahay inaan dalbado Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19?
Fadlan eeg qeybta sare u "qalmida."
2. Goorma ayey tahay in la codsado?
Waqtiga codsigu wuxuu furmayaa Khamiista, Oktoobar 15 markay tahay 8:00 AM wuxuuna xirmayaa Khamiista, Nofeembar 5 markay tahay 11:59 PM. Waad soo gudbin kartaa dalabkaaga wakhti kasta inta lagu jiro muddadan. Codsiyada goor dambe lama aqbali doono.
3. Noocee dukumiinti ah ayaan ubaahanahay inaan soo gudbiyo?
4. Qof kasta oo codsada ma heli doonaa gargaar lacageed?
Maaliyad yar awgeed, ma awoodno inaan u adeegno qof walba. Qaar ka mid ah codsadayaasha u qalma ayaa laga yaabaa inaysan helin taageero dhaqaale.
5. Sidee loo xulayaa codsadayaasha xaqa u leh?
Maaliyad yar awgeed, ma awoodno inaan u adeegno qof walba. Nidaamka dib-u-eegista MA AHAN sida loo soo kala hor gudnistay. Si aan u taageerno kuwa ugu baahida badan, waxaan mudnaanta siineynaa codsadayaasha iyadoo lagu saleynayo shuruudaha aan ku qorneyn liiska nidaam gaar ah:
Waalidiinta keligood ah / daryeelayaasha.
Helitaanka lacagta Shaqo La'aanta ee Gobolka Washington.
Halista jirro daran oo ka timaadda infekshinka COVID-19.
Kuwa ka badbaaday rabshadaha guriga, faraxumaynta galmada, ama ka ganacsiga dadka.
6. Xubnaha qoyskeyga miyaa mise waxaan u baahanahay inaan ka walwalayo lacagta laga qaado dadweynaha?
Sida laga soo xigtay Hey’adda Adeegyada Jinsiyadda iyo Socdaalka ee Mareykanka (USCIS), "gargaarka gargaarka masiibooyinka", sida barnaamijkan oo kale, looma tixgelin doono go'aaminta in shaqsigu uu yahay mid qaatay lacag dadweyne iyo sidoo kale. Waxaad ka akhrisan kartaa warqaddan waxii maclumaad dheraad ah xaqiiqda ah ku saabsan USCIS iyo lacagta Dadweynaha. Haddii aad su'aalo ka qabtid xaaladdaada socdaal iyo/ama isticmaalka dheefaha, waa inaad la hadashaa qareenka arrimha socdaalka ama wakiilka ay aqoonsataahay Waaxda Cadaalada (DOJ).
7. Helitaanka kaalmadan lacageed saameyn ma ku yeelan doontaa xubnaha qoyskeyga 'ama awooddeyda ah inaan noqono muwaadin Mareykan ah?
Haddii aad tahay qof heysta sharciga deganaashaha / haysta kaarka cagaaran, helitaanka kaalmada maaliyadeed ee Seattle COVID-19 ee Musiibada Gargaarka Muhaajiriinta wax saameyn ah kuma yeelanayso awoodda aad ku noqon karto muwaadin Mareykan ah. Sidoo kale saameyn kuma yeelan doonto wax sameyna xubinta sida sharciga ku degan/heysta kaarka cagaaran oo sharci ah inuu noqdo muwaadin Mareykan ah. Haddii aad su'aalo ka qabtid xaaladdaada socdaal iyo / ama isticmaalka dheefaha, waa inaad la hadashaa qareenka arrimha socdaalka ama wakiilka ay aqoonsataahay Waaxda Cadaalada (DOJ).
8. Macluumaadka aan ku bixiyo arjiga ma qarsoodi baa?
Hay'adda samafalka ah ee Scholarship Junkies ayaa mas'uul ka ah ururinta macluumaadka shaqsiyeed ee aad si iskood ah ugu soo gudbiso arjiga internetka ee Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19. Si looga caawiyo kahortaga marinka aan la fasaxin, la ilaaliyo saxsanaanta xogta, iyo in la hubiyo isticmaalka saxda ah ee macluumaadka, Scholarship Junkies waxay dajiyeen hanaan ku habboon muuqa, elektarooniga, iyo maamulka si loo ilaaliyo loona sugo macluumaadka ay aruuriyaan. Iyagu iskood ulama wadaagayaan xogtaada hay'adaha dawladda, oo ay ku jirto Magaalada Seattle. Waxaad ka baran kartaa halkan wax badan oo ku saabsan Scholarship Junkies oo dhameystiran ilaalilinta Siyaasadda maclumaadka Khaaska ah (Ingiriis kaliya).
9. Ma haysto kumbuyuutar ama internet-ka. Ma jiraan xulashooyin kale oo aan dalbado?
Waxaan awood u leenahay in aan ku soo bandhigno arjiga boggan internetka oo keliya si aad ku dhammaystiri karto kombiyuutar ku xiran internetka ama aaladda moobaylka. Hay'adaha jaalkayagu ah waxay bixiyaan caawimaad taleefanka ah waxaana laga yaabaa in ay kaa caawiyaan in aad dalbato haddii aadan haysan qalab ku xiran internetka. Fadlan la xiriir mid ka mid ah hay'adaha hoos ku qoran si aad gargaar u hesho:
10. Waa imisa lacag-bixintu?
Hal qof oo qaangaar ah ayaa heli kara lacag hal mar ah oo ah $ 1,000.
Labada qof (laba qof oo waaweyn) waxay xaq u leeyihiin inay helaan hal mar ugu badnaan $2,000.
Lammaanaha, waalidiinta, ama daryeelayaasha carruurta leh waxay xaq u leeyihiin inay helaan lacag hal mar ah oo dhan illaa $ 3,000.
11. Tani ma lacag bixin hal mar ah baa?
Codsadeyaasha uqalma waxay kaliya awoodaan in ay helaan lacag bixin hal mar ah.
12. Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la helo lacagtayda?
Fiiri Su’aasha # 13.
13. Sideen ku heli karaa lacag-bixinta?
Waxaa jira afar ikhtiyaar oo loogu talagalay helitaanka lacag-bixinta:
7-14 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo.
Laguugu soo diri donaa boostada cinwaanka aad dhiibtay.
Kaarka hadiyada ee Mastercard ma shaqeynaya waxii ka dambeeya 12 bilood**
Karka hadiyad Mastercard ka oo Dijital ah
1-2 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo.
Un Iimayl laguugu soo hagaajiya cinwaanka emaylka aad dhiibtay.
Toos Akountiga laguugu soo shabayo
2-5 maalmood ka dib xilliga codsigu xirmo ayaa go'aannada abaalmarinta la gaarayo.
Toos ugu shubista Koontada Bangiga.
*Jeega lama isticmaali karo 90 maalmood kadib.
**Kaarka hadiyada ee Mastercard ma shaqeynaya waxii ka dambeeya 12 bilood.
14. Waxaan ku noolahay meel ka baxsan xuduudaha magaalada Seattle. Weli ma codsan karaa?
Haa. Waad codsan kartaa haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Seattle, laakiin waa haddii adiga ama qof kale oo reerkaaga ka mid ah uu ka shaqeeyo xudduudaha magaalada Seattle AMA aad dhigataan iskuul ku yaal soohdimaha magaalada Seattle.
15. Waxaan ahay qof aan heysan dekumantiga sharciga ah. Xaq ma u leeyahay inaan helo lacagta?
Lacagtan waxaa loogu talagalay muhaajiriin kasta oo aan u qalmin kaalmada ay bixisay dowlada federaalka ee 'CARES Act' (Fiiri Su'aasha # 1). Magaalada Seattle looma oggola inay wax ka weydiiso xaaladda socdaal ee qof kasta oo waafaqsan Sharciga 121063. Tani waxay ka dhigan tahay ma weydiinayno xaaladda muhaajirnimo ee foomka codsiga Seattle COVID-19 Musiibada Gargaarka Musiibada.
16. Waan guursaday, xaaskeyga iyo aniga waxaan uqalanaa maalgelinta. Miyaan labadeenu wada codsanaa?
Kaliya midkiin waa inuu u dalba reerkaaga. Lammaanaha (2 dadka waaweyn) waxay xaq u leeyihiin inay helaan ugu badnaan $ 2,000.
17. Reerkeygu wuxuu ka kooban yahay qoysas badan. Sideen u dalbanaa?
Qoys walba waa in uu soo gudbiyaa hal codsi oo qoyskaas ah.
18. Reerkaygu wuxuu kakooban yahay dad waaweyn oo keligood ah. Sideen u dalbanaa?
Qof kasta oo qaangaar ah waa inuu u soo gudbiyaa hal codsi.
19. Ma u dalbi karaa anoo ku hadlaya magaca carruurtayda da'doodu ka yar tahay 18 sano?
Haa. Carruurta waa in lagu daraa arjigaaga, illaa intaad u-qalanto, sida ku cad shuruudaha ku taxan Su'aasha # 1.
20. Waxaan ahay daryeele carruur. Ma u dalbi karaa iyaga ama ma ku dari karaa dalabkayga?
Haa. Haddii aad tahay daryeele ama ilaaliye ilmo yar oo aan ahayn ilmahaaga dhalasho ahaan, cunugga aad korsatay, ama wiilka aad sodogga u tahay, waxaad soo gudbin kartaa codsi kale in aad wakiil ka tahay ilamaa ilmahaas uu xaq u leeyahay lacagtan.
21. Ma deggani Seattle. Meeshaydii hore ee shaqo waxay ahayd Seattle. Aniguna wali shaqo la'aan ayaan ahay. Weli ma codsan karaa?
Haa. Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan magaalada Seattle IYO meeshii aad ka shaqeyn jirtay hore muddada u dhexeysa Janaayo 1, 2020 illaa Sebtember 30, 2020 ee ku taal magaalada Seattle, markaa waa inaad dalbataa. Waxaad u baahan doontaa in aad keento dukumeenti cadeynaya meeshii aad ka shaqeyn jirtay hore in ay ahayd Seattle. Kafiiri su'aasha # 3 liiska dukumiintiyada la ansixiyay.
22. Hadda ma haysto guri joogto ah. Weli ma codsan karaa, sidee baanse ku heli karaa gargaar lacageed anigoon cinwaan laheyn?
Haa. Codsadeyaasha uqalma ee aan lahayn guri joogto ah waa inay wali codsadaan. Waxaad haysataa laba ikhtiyaar:
I. Haddii aad xaq u leedahay oo aad leedahay emayl, waxaad awoodi kartaa in aad lacag ku hesho kaarka hadiyadda dijitaalka ah.
II. Haddii aad xaq u leedahay oo aad doorbideyso inaad hesho in jeeg laguu jaro ama kaarka hadiyadda, ururada aan iskaashiga leenahay way ku caawin karaan. Tusaale ahaan, waxaad awoodi kartaa in aad isticmaasho cinwaanka boostada urur si aad u hesho jeega laguu jaray. Fadlan la xiriir mid ka mid ah hay'adaha hoos ku qoran si aad gargaar u hesho:
23. Ma jiraan xulashooyin kale haddii sabab kasta oo ay noqoto, ee aanan awoodi waayo in aan helo kaalmada dhaqaale ee Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19?
Gobolka Washington wuxuu kaloo bixiyaa barnaamij la mid ah kaalmada maaliyadeed, oo ah Sanduuqa Taakulaynta Muhaajiriinta. Waxaad ka codsan kartaa halkan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa barnaamijyo kale oo caawimaad ah oo la xiriira COVID-19 ee magaalada Seattle Bogga Kheyraadka Bulshada: seattle.gov/covid-19.
24. Ma jiraa nidaam rafcaan haddii codsigeyga kadib aanan ka helin kaalmada dhaqaale ee Sanduuqa Gargaarka Musiibada Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19?
Sababtoo ah tirada badan ee la filayo ee codsiyada, ma jiri doonto nidaam rafcaan. Gobolka Washington wuxuu kaloo bixiyaa barnaamij la mid ah kaalmada maaliyadeed, oo ah Sanduuqa Taakulaynta Muhaajiriinta. Waxaad ka codsan kartaa halkan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa barnaamijyo kale oo caawimaad ah oo la xiriira COVID-19 ee magaalada Seattle Bogga Kheyraadka Bulshada: seattle.gov/covid-19.
25. Sidee loo maalgeliyaa Sanduuqa Seattle COVID-19 ee Gargaarka Musiibada ee Muhaajiriinta ee Seattle COVID-19?
Bishii Ogosto 21, 2020, Duqa magaalada Jenny Durkan, Madaxweynaha Golaha Degaanka M. Lorena González, Teresa Mosqueda Xubin Golaha Degaanka ah, iyo Tammy Morales Xubin Golaha Degaanka ah ayaa ku dhawaaqay wadar dhan $ 45 milyan oo gargaar ah oo loogu talagalay sameynta COVID 19. Xirmadan, Xafiiska Muhaajiriinta iyo Arimaha Qaxootiga (OIRA) ayaa kahelay $ 9 milyan oo maaliyad cusub ah oo laga helo sanduuqa guud ee Magaalada si loogu caawiyo shaqaalaha soo galootiga ah ee dakhliga hoose ee Seattle ee la kulmay dhibaato dhaqaale oo COVID-19 u saameeyey. Maalgalintan waxaa ka mid ah $ 7.9 milyan oo loogu talagalay in loogu isticmaalo kaashka tooska ah ee muhaajiriinta danyarta ah. $ 1.1 milyan ee soo hartay ayaa loo isticmaali doonaa iskaashi fidin ah oo lala yeesho ururada ku saleysan bulshada iyo dadaallada kale ee marin u helka luqadda si loo hubiyo in dadka barta luqadda Ingiriisiga (ELL) ay ka ogaadaan barnaamijkan cusub iyo barnaamijyada kale ee kaalmada maaliyadeed ah.
26. Maxaa dhacaya haddii reerkaygu qalad ahaan ku soo gudbiyo laba arji? Miyaanan markaa u qalmin in aan natiijo helno?
Haddii reerkaagu qalad ahaan usoo gudbiyo codsiyo badan, Scholarship Junkies waxay awood u yeelan doontaa in ay aqoonsato in dalabyo badan oo isla reerka ah la soo gudbiyay waxayna dib u eegi doonaan arji gudbiyaha baahida sare qaba. Waxay sidoo kale la xiriiri karaan codsadayaasha in ay taleefoon and TEXT u diraan haddii ay ogaadaan arrimo ku saabsan arjiga.
27. Weli su'aalo ayaan qabaa. Qof ma wici karaa si aan su'aalha ku weydiiyo luqadeyda ahaan?
Fadlan la xiriir mid ka mid ah hay'adaha hoos ku qoran si aad gargaar u hesho: